( ၃၇ )နှစ်ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ မင်းသားချော ထွန်းထွန်း – Cele Oscar
( ၃၇ )နှစ်ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ မင်းသားချော ထွန်းထွန်း
December 24, 2020 By L YC News
Examplez ထွန်းထွန်း ဆိုပြီး တစ်ချိန်က ပရိသတ်တွေ သည်းသည်းလှုပ် အားပေး ကြတဲ့ ထွန်းထွန်း ကတော့ သီချင်းဆို ကောင်းရုံ သာမက သရုပ်ဆောင်လည်း ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်း ကတော့ ဂီတနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်တွေများစွာကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ သလို ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆) ခုနှစ်ကလည်း “အုတ်ကြားမြက်ပေါက်” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး နဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ဆုကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်း ကလည်း သူ့ကို ချစ်ခင် အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဂီတ ၊ ရုပ်ရှင် နယ်ပယ် နှစ်ခုစလုံးမှာ လစ်ဟင်း မှုမရှိအောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစား တင်ဆက် ဖျော်ဖြေပေးနေသူတစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့က တော့ ပရိသတ်ကြီး ချစ်ကြတဲ့ အကယ်ဒမီ ထွန်းထွန်း ရဲ့ မွေးနေ့ရက် မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉၈၃) ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်းက ဒီနေ့မှာ တော့ သူ့ရဲ့ အသက် (၃၇) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ကို ဖြတ်သန်းရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်း ကတော့ အသက်တစ်နှစ် ကြီးလာတဲ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အရင်အတိုင်း လူပျို ကြီးအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေပြီး အိမ်ထောင်ပြုမယ့် အရေးကို မစဉ်းစားသေး ကာ တစ်ကိုယ်တည်း နေထိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းထွန်း ကတော့ (၃၇) နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုကို မလျော့စတမ်း ရရှိနေပြီး ပျိုတိုင်း ကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် ဘွဲ့ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး လည်း ဒီကနေ့ရဲ့ မွေးနေ့ရှင် ထွန်းထွန်း အတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေး ပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှု ပေးကြတဲ့ ( Cele Connections ) ပရိသတ်ကြီး အားလုံး လည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Htin Aung Tun’s fb
Examplez ထှနျးထှနျး ဆိုပွီး တဈခြိနျက ပရိသတျတှေ သညျးသညျးလှုပျ အားပေး ကွတဲ့ ထှနျးထှနျး ကတော့ သီခငျြးဆို ကောငျးရုံ သာမက သရုပျဆောငျလညျး ကြှမျးကငျြသူ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ထှနျးထှနျး ကတော့ ဂီတနဲ့ ပကျသတျပွီး အောငျမွငျမှု မှတျတိုငျတှမြေားစှာကို စိုကျထူနိုငျခဲ့ သလို ပွီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆) ခုနှဈကလညျး “အုတျကွားမွကျပေါကျ” ရုပျရှငျ ဇာတျကားကွီး နဲ့ အကောငျးဆုံး အမြိုးသား ဇာတျပို့ဆုကို ရရှိ ပိုငျဆိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထှနျးထှနျး ကလညျး သူ့ကို ခဈြခငျ အားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဂီတ ၊ ရုပျရှငျ နယျပယျ နှဈခုစလုံးမှာ လဈဟငျး မှုမရှိအောငျ အကောငျးဆုံး ကွိုးစား တငျဆကျ ဖြျောဖွပေေးနသေူတဈယောကျ ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ ဒီဇငျဘာလ (၂၄) ရကျနကေ့ တော့ ပရိသတျကွီး ခဈြကွတဲ့ အကယျဒမီ ထှနျးထှနျး ရဲ့ မှေးနရေ့ကျ မွတျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ (၁၉၈၃) ခုနှဈမှာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့ ထှနျးထှနျးက ဒီနမှေ့ာ တော့ သူ့ရဲ့ အသကျ (၃၇) နှဈမွောကျ မှေးနေ့ ကို ဖွတျသနျးရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထှနျးထှနျး ကတော့ အသကျတဈနှဈ ကွီးလာတဲ့ သူ့ရဲ့မှေးနမှေ့ာ အရငျအတိုငျး လူပြို ကွီးအဖွဈ ဆကျလကျရှိနပွေီး အိမျထောငျပွုမယျ့ အရေးကို မစဉျးစားသေး ကာ တဈကိုယျတညျး နထေိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
ထှနျးထှနျး ကတော့ (၃၇) နှဈဆိုတဲ့ အရှယျကို ရောကျလာခဲ့ပွီ ဖွဈပမေယျ့ မိနျးကလေး ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမှုကို မလြော့စတမျး ရရှိနပွေီး ပြိုတိုငျး ကွိုကျတဲ့ နှငျးဆီခိုငျ ဘှဲ့ကို ဆကျလကျ ထိနျးသိမျး ထားနိုငျဆဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီး လညျး ဒီကနရေဲ့ မှေးနရှေ့ငျ ထှနျးထှနျး အတှကျ အမှတျတရ မှေးနဆေု့တောငျးစကားလေး ပွောခဲ့ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှု ပေးကွတဲ့ ( Cele Connections ) ပရိသတျကွီး အားလုံး လညျး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနေ့ ကို ပိုငျဆိုငျ နိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျး ပေးလိုကျပါတယျ။
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်း album ကိုအားပေးတဲ့သူများနေလို့ လက်မှတ်တွေထိုင်ထိုးနေရတဲ့ အဆိုတော် လင်းလင်း
” ဗိုက်အရမ်းအောင့်လို့ UHC ဆေးရုံမှာ” ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ မကြီးစန်း
ဂေဟာမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေ အုပ်စုလိုက်နေမကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် အရမ်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ မေမေ ခိုင်နှင်းဝေ………
သူကိုယ်တိုင် ပန်းချီဆွဲနေတဲ့ အဆုံးသတ် VEDIO လေးကိုပရိတ်သတ်တွေဆီချပြလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်…….
မိသားစုပိုင် Mercury စားသောက်ဆိုင်နဲ့ Karaoke မီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်….
အသက် (၄၁)နှစ်ပြည့် မြောက်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ ဆရာတော်အရှင်သီရိ စန္ဒသူရိယကို ဆွမ်းနဲ့ သင်္ကန်းကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)
မိခင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ အခုချိန်ထိကို အတော်လေးယူကြုံးမရ ဖြစ်နေတဲ့ မေပန်းချီ
© Cele Oscar 2022 Cele Oscar2022 • Themaga powered by WordPress